ဘုန်းကျော်: ရခိုင်သင်္ကြန်ဖိတ်စာ (နယူးယောက်)
မနေ့တနေ့က ပြီးခဲ့တဲ့ G20 မှာ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ် ဘယ်လိုရက်စက်ခဲ့လဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ဗီဒီယိုအသစ်တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဖြူကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ ဒီမိုတွေနဲ့ အဖြူကိုပထွေးသိပ်တော်ချင်တဲ့ နအဖလူတွေ ကြည့်ဖို့ပါ။ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိပါတယ်။ မိမိရဲ့ အဏာကို ထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြိုခွင်းတာ အားလုံးအတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်တွေကြီးပြီး အချင်းချင်းစောက်တင်းပြော ရန်ဖြစ်လိုတဲ့ နွားအိုကြီးများ အမြင်မှန်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဆီပုံးမှာ မြန်မာလူမျိုးကို စောက်သုံးမကျဘူးလို့ ဆဲဆိုနေတဲ့ ကောင်တွေလည်း အခုဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ရင်း… ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းနှိမ်ချပြောနေတာတွေရပ်ပြီး . . . .မိမိလူဘောင်ကို အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တိုးတက်အောင် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်နိုင်ပါစေလို့။
☀ PROTESTING is more important than Voting
☀ IN DEFENSE OF TORONTO POLICE
☀ G20 Protests in Toronto Turn Ugly
☀ Toronto Neighborhod Defends G20 Activists
☀ G20 Policing: From Bubbles to Bookings?
☀ G20 Toronto - The Fight For Civil Rights
☀ Opposing the G20? We've only just begun.
☀ US General says- "It's good fun to shoot people"
☀ Immortal Technique: Haitiapolice state run by US & UN
ဒီစောက်ရှုးတစ်ကောင်နဲ့ ဒုက္ခပဲ။ မင်း သန်းရွှေ,ဘောကို တချိန်လုံးမ, ချင်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ ။ မင်းတို့ အညာသားတွေ ပုန်းရည်ကြီး လောက်ပဲ ဟင်း,ထင်နေတာလား။
☀စစ်သားတွေ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ချစ်နေတာ တိုင်းပြည်ချစ်တာ မဟုတ်ပါ။
☀စစ်သားတွေ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့ ၂၀၁၀ကို ထောက်ခံတာလဲ တိုင်းပြည်ချစ်တာ မဟုတ်ပါ။
☀ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး အမေခေါ်တာ တိုင်းပြည်ချစ်တာ မဟုတ်ပါ။
☀ဒီမိုဝါဒကို ချစ်တာလဲ တိုင်းပြည်ချစ်တာ မဟုတ်ပါ။
☀နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည် အတ္တစိတ်ကြောင့် တိုင်းအပေါ်သစ္စာဖေါက်မှု လုပ်တတ်သည်ဆိုသည့် ခါးသီးသည့် အမှန်တရားကို လက်ခံပါ။
☀စစ်သား နဲ့ ပြည်သူ သွေးခွဲထားတဲ့ စစ်ဝါဒကြီး ကျဆုံးပါစေ။ နိုင်ငံခြားကို အထင်ကြီးနေတဲ့ ဒီမိုအစွန်းရောက်များ ကျဆုံးပါစေ။
☀အဖြူကိုပထွေးတော်၊ တရုတ်ကို အမေပေး၊ ကုလားကိုဖင်ရက် စသဖြင့် စသဖြင့် သူတပါးကို အားကိုးနေတဲ့ စိတ်တွေဖျောက်ပါတော့။ ပြည့်အင်အား ပြည်တွင်းမှာပဲရှိပါတယ်။ အားလုံးလက်တွဲကျပါ။
☀မိမိတိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်း အကျိုးကိုသာ ကြည့်ရှုပြောဆိုနေတဲ့ အတ္တသမားများကျဆုံးပြီး ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ရှိသော ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်ပါစေ။ မြန်မာအချင်းချင်း သွေးခွဲ သပ်လျှိုထားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ဖျက်ဆီးပြစ်ကြပါ။
☀ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ပအို့၊ ဓနု၊ရှမ်း၊ မွန်တွေဟာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုးအဖြစ်ခံယူကြပါ။ ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး တန်းတူဆက်ဆံကြပါ။ (မွတ်ဆလင်သည် ဘာသာတစ်ခုမဟုတ်ပါ) မေတ္တာတရားထွန်းကားပြီး လောဘနှင့် ဒေါသကို လျှော့ချမှသာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း မှန်ကန်သော ချစ်ကြည်မှုဖြစ်လာပေမည်။
☀ကျုပ်တို့ရဲ့ အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဘယ်လိုချစ်ရမှန်းမသိသေးရင် ဒီမှာလေ့လာပါ။